Echiche Geospatial na SuperMap - Geofumadas
Geofumadas kpọtụụrụ Wang Haitao, osote onye isi ndị SuperMap International, iji buru ụzọ hụ ụzọ azịza ọhụụ esi arụ ọrụ na geospatial, nke SuperMap Software Co., Ltd na-enye.
1.Paanụ gwa anyị banyere njem mgbanwe nke SuperMap dị ka onye na-eweta China na onye na-ere ahịa GIS
SuperMap Software Co., Ltd bụ ezigbo usoro GIS usoro ngwanrọ na ndị na-eweta ọrụ. E hibere ya na 1997 na Beijing (n'isi ụlọ ọrụ). Ihe dị mkpa kachasị mkpa bụ na SuperMap bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ GIS nke edepụtara na China na 2009. SuperMap elekwasịwo anya na iwulite ngwanrọ GIS ngwanrọ, ngwanrọ ngwa yana ọrụ igwe ojii ntanetị kemgbe mmalite ya na 1997. Ugbu a, SuperMap esonyerela ihe karịrị 1,000 ndị mmekọ ndụ ndụ iji mee ka ozi si na gọọmentị, ụlọ ọrụ na azụmahịa dị iche iche rụọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, SuperMap raara nye mmepe mba ofesi. Ka ọ dị ugbu a, SuperMap abanyela n'Eshia, Europe, Africa na South America na mba ndị ọzọ na mpaghara na mmepe ndị nkesa na ndị mmekọ si karịa mba 30 na ndị ọrụ njedebe si karịa mba 100.
2.Gịnị bụ onyinye gị kachasị ọhụrụ?
Ngwaahịa SuperMap kachasị ọhụrụ bụ SuperMap GIS 10i, nke gụnyere GIS Server, Edge GIS Server, Terminal GIS, Online GIS Platform. Na mgbakwunye, SuperMap GIS 10i na-ejikọ teknụzụ AI GIS ma na-agbanwe Big Data GIS, 3D XNUMXD GIS, Cloud Native GIS na Cross Platform GIS iji guzobe usoro teknụzụ igodo ise "BitCC" maka ngwanrọ ngwanrọ GIS.
3. Kedu ọrụ GIS nwere ike rụọ na njikwa ọma nke obodo ndị maara ihe? Kedu ngwa ahia gị buziri nke obodo smart? Kedu otu ngwaahịa gị si dị iche na sọftị GIS ndị ọzọ ama ama?
N'ihi njirimara oghere ha, GIS na-arụ ọrụ dị oke mkpa na obodo ndị nwere ọgụgụ isi. Nke mbu, ihe omuma banyere GIS bu ihe omuma nke uzo maka ijikwa obodo ndi maara ihe; nke abụọ, GIS na-eweta onye na-eweta ihe dị irè maka ụdị ngwa ozi ntanetịime obodo jikọtara ọnụ, nke nwere ike inyere aka na njikọta nke ihe ọmụma bara uru ma nweta mmepe na ojiji nke akụrụngwa; Nke ato, iji teknụzụ GIS nwere ike inye nkwado maka ọhụhụ mpaghara, mkpebi ala, okirikiri, na njikwa ala maka ngwa obodo dị na ya.
N'ala nke obodo mara mma, SuperMap na-enye usoro zuru ezu “otu ikpo okwu, otu netwọkụ, otu ala” dabere na obodo, mpaghara, ógbè, okporo ụzọ, ogige na ọbụna ụlọ. "Otu ikpo okwu", ya bu, ohere nke nnukwu oge ikpo okwu nke obodo smart, na-enye usoro eji akwado maka ijikọ, njikwa na mgbanwe nke akụrụngwa ozi mpaghara. "Netwọlụ" na-ezo aka na ngwa nke njikwa obodo netwọkụ, nchịkwa mmekọrịta ọha na eze, n'okporo ụzọ na ọchịchị ime obodo na ndị ọzọ. Maka ọchịchị obodo mepere emepe, ọ na-enye njikwa dijitalụ na nchịkwa obodo, nyocha nke steeti obodo na nyocha na ikpe nke ọnọdụ obodo iji meziwanye ọkwa ọchịchị obodo. "Otu gbara akwụkwọ", ya bụ, na-ezo aka na ogige ntụrụndụ, ubi ndị mara mma na ngwa ndị ọzọ, tumadi n'ụdị ogige na saịtị. Ọ na-ejikọta BIM na GIS iji nye ọrụ a nụchara anụcha na ngwa njikwa maka atụmatụ ubi na atụmatụ ogige, ihe owuwu, na njikwa, na ịkwalite ikike ọrụ nchịkwa na asọmpi n'ọhịa.
Tụnyere ndị na-ere software GIS ndị ọzọ, SuperMap nwere nnukwu uru na ọghọm nnukwu data yana teknụzụ 3D GIS ọhụrụ. Na mgbakwunye, SuperMap nwere ike inye ndị ọrụ ihe ngwọta zuru oke na atụmatụ obodo, atụmatụ ụlọ, njikwa na ndị ọzọ.
4. Kedụ ka njikọta nke BIM na GIS si aba uru na ngalaba ihe owuwu? Supermap enwewo ike imebe akara n’ihe eji ewute dijitalụ? Kekọrịta ọmụmụ ihe banyere BIM + GIS kachasị mma.
Ihe mmekorita nke BIM na GIS na-enye ndi oru aka ka ha webata onodu ihe omume buru ibu n’ime oru a iji mata ihe oma banyere gburugburu, mee ka osooso oru ngo ma meziwanye oru na ndozi akuko.
Otu n'ime ikpe dị otú ahụ bụ Beijing Subcentre Smart Construction Supervision Platform. N'ọnọdụ a, njikọta enweghị nkewa nke BIM na GIS na-enye kọmiti na imepụta ihe omuma nke geospatial iji ghọta ọnọdụ ndị kachasị ọhụrụ ma nyere ha aka ịnapụta nsonaazụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi n'okpuru usoro ihe owuwu dị oke.
Ọzọkwa, dabere na usoro GIS 3D pụtara ìhè na data IoT, ikpo okwu nwere ike inye ndị ọkachamara na ndị ọzọ metụtara ya ịme anwansị oge nke mmepe maka nyocha na njikwa na njikwa usoro ndụ niile.
5.Olee kedu itinye aka na ngwa SuperMap ka o di ugbua? Kedu usoro ị na - eme iji bulie mmata na ịnabata?
Ka ọ dị ugbu a, “SuperMap nwere oke nke atọ kachasị na ahịa GIS zuru ụwa ọnụ, yana mpaghara mbụ kachasị na ahịa Asia GIS. Ka ọ dị ugbu a, akụkọ ahụ na-egosi na site na uto ngwa ngwa na ihe karịrị afọ 20, SuperMap Software bụ onye na-ere ahịa GIS nke China ugbu a, yana ndị na-ere ahịa GIS dị elu n'ahịa China, "dị ka Akụkọ nyocha Ọmụmụ Market Market nke Sistem Geographic Information Systems bipụtara na ARC Advisory Group.
Iji bulite ụdị ika SuperMap ma nwekwuo nkuchi, SuperMap gara n'ihu na-elekwasị anya n'ịzụlite na inye ngwaahịa na teknụzụ dị elu na asọmpi na ụlọ ọrụ. Na SuperMap ekwusiwo ike na ịdị mma bụ ihe kacha mkpa tupu mmalite ya. N'otu oge, n'ọhịa azụmaahịa, SuperMap esonyela ndị mmekọ iji wee rụkọta ọrụ ọnụ, na-enye ngwọta na ngwa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma. Ọzọkwa, SuperMap nwere mmekọrịta dị mma na ọtụtụ mahadum gburugburu ụwa ma na-enye onyinye na ịnye ngwanrọ na nkwado teknụzụ maka agụmakwụkwọ GIS ka mma. Ọzọkwa, SuperMap azụlitela SuperMap GIS software mepere emepe yana SuperMap iClient na ndị ọzọ maka ndị ọrụ erughi ala gburugburu ụwa.
6. Ebee ka ị hụrụ SuperMap n'afọ ole na ole sochirinụ?
N’oge na-adịghị anya, SuperMap ga-agbasi mbọ ike n’ihe gbasara atụmatụ ime obodo, smart smart, BIM + GIS, AI GIS na ndị ọzọ, dịka mmepe nke teknụzụ SuperMap nke Big Data GIS, 3D GIS, AI GIS, yana ụdị ndị ọrụ na ntọala ndị ọrụ gburugburu ụwa dịka gọọmentị, mahadum.
7. Nzọụkwụ dị a areaa ka ị na-eme iji mee ka GIS nwee amamihe karịa afọ AI?
SuperMap weputara SuperMap GIS 10i na Mkpokọta Nzuzo Nzuzo nke GIS nke 2019. SuperMap GIS 10i na-ejikọ teknụzụ ọgụgụ isi zuru oke iji wuo usoro teknụzụ sitere na "BitCC", nke gbakwunyere AI GIS na nso nso a na sistemụ ngwaahịa.
Maka AI GIS, ọ mejupụtara akụkụ atọ:
GeoAI: Nchịkọta data na nhazi algorithm nke na-eme ka AI ma bụrụ ngwaahịa nke AI na GIS.
AI maka GIS: Iji ikike AI iji bulie atụmatụ ngwanrọ GIS na ahụmịhe onye ọrụ.
GIS maka AI: iji nyocha nke GIS na teknụzụ nlegharị anya iji mepụta ohere gbasara ohere na nyocha nke ohere nke nsonaazụ nsonaazụ AI.
SuperMap ga-eme ọkaibe GIS site na isoro usoro nyocha IA GIS gara aga.
8. Kedu ụkpụrụ kachasị mkpa nke sọftụwia gị na-etinye maka mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ geospatial, injinịa na arụmọrụ?
N'afọ 2017, SuperMap mepere nkọwapụta atụmatụ oghere gbasara 3D (S3M) maka ịgbanye ọsọ ọsọ, na-ebugote, na-egosipụta oke ma ọ bụ usoro geospatial 3D gafee ọtụtụ ngwaọrụ na nyiwe. Ọ meekwala ọ bụghị naanị nlere anya, kamakwa ajụjụ gbasara nyocha na nyocha nke nnukwu data gbasara oghere. Ọzọkwa, S3M bụ usoro data otu izizi nke China Association for Geospatial Information Society bipụtara. Ugbu a S3M anabatala ya n'ọtụtụ ụlọ ọrụ 3 ndị ama ama na ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka DJI, Altizure, wdg.
Previous Post«Previous Scotland sonyere na Nkwekọrịta Ọha na mpaghara Geospatial
Next Post Leica Geosystems webatara ngwugwu nyocha laser 3D ọhụrụNext »